Nandeha bisikileta sy tongotra naka ny zanany 3 tany Vangaindrano hody noho ny fahafatesan'ny raibeny nitaiza azy ireo. Nanaraka ny morontsiraka antsinanana mandra-pahatonga tany vangaindrano. Mbola nihodidina ny Atsimo manontolon'ny Nosy nandeha an-tongotra ary nanosika bisikileta feno entana kosa rehefa niverina fa tsy nandeha tamin’ny làlany nandroso. Niala tao Vangaindrano - Tolagnaro- Amboasary - Ambovombe - Tsihombe - Tranoroa - Ampanihy - Ejeda - Betioky - Andranovory - Toliara - Andranovory - Sakaraha - Ihosy - Ambalavao - Fianarantsoa - Ambohimahasoa - Ambositra - Antsirabe - Antanifotsy – Ambatolampy, ary omaly izy ireo no tafiditra teto Antananarivo. Notsenaina tamin’ny fomba makotroka teny Bongatsara, Andoharanofotsy Tanjombato, hatreny Andranomena. Hatao fitiliana coronavirus izy ireo, raha ny vaovao azo omaly hariva. 12 000 km natao herintaona teo no voalaza fa efa vitan-dry zareo. Mandeha 50 hatramin’ny 100 km vao mahita tanàna, ary misy fotoana matory anaty ala.
LOUIS MICHEL RAMORASATA DIT ZOTO (1949-2013)
Raha ny tantara, dia Ratompokolahy Louis Michel Ramorasata no nitondra ny anarana « Zoto » voalohany. In-telo izy no nihodidina an’I Madagasikara, ka 21.600 km no totalin'ny lalana vitany: 9 mey 1976 ka hatramin’ny28 janoary 1977; 3 aprily 1983 ka hatramin’ny 6 novovambra 1983; 1 aogositra 1988 ka hatramin’ny 25 janoary 1989. Mpampianatra, mpanao gazety, coursier, “agent de maitrise de lubrification”... no asa nataony fahavelony. Nanoratra ny boky «Trois tours de madagasikara a pied», «Aller vers l'autre» no hafatra nampitainy tamin'izany hikatsahana ny fihavanana na dia ao anatin'ny sarotra aza. Nodimandry teo amin’ny faha-69 taonany ny 22 martsa 2013 tao amin’ny hopitaly Befelatanana izy vokatry ny takaitran’ny lozam-pifamoivoizana nihatra taminy ny 9 desambra 2012.